Rhymes na akụkọ ifo nke Bécquer | Akwụkwọ dị ugbu a
Encarni Arcoya | 25/11/2021 17:50 | Emelitere ka 25/11/2021 19:04 | Akwụkwọ
Isi mmalite Foto Rhymes na akụkọ ifo nke Bécquer: XLSemanal
N'ezie ihe karịrị otu ugboro ka ị nụworo akwụkwọ ahụ Rhymes na akụkọ ifo nke Bécquer. Ma eleghị anya, ị ga-agụrịrị ya n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ma ọ bụ nyochaa otu n'ime ha na klas ụfọdụ, nri?
Ma ị nụla banyere ya ma ọ bụ na ọ dị ọhụrụ nye gị, n'okpuru ebe a, anyị ga-enye gị ntakịrị nghọta n'ime akwụkwọ ahụ, ihe ị na-ahụ na ya, na ihe mere o ji dị mkpa. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị gụọ ya.
1 Ọnye na-bụ Gustavo Adolfo Bécquer
2 Kedu mgbe e bipụtara Rimas y leyendas de Bécquer
3 Kedu ụdị edemede Rimas y leyendas so na ya?
4 Ugboro ole ka enwere?
5 Na akụkọ ifo?
Ọnye na-bụ Gustavo Adolfo Bécquer
Gustavo Adolfo Becquer, ma ọ bụ Bécquer, dị ka a makwaara ya, a mụrụ na Seville na 1836. Site na agbụrụ French (n'ihi na nne na nna ya si n'ebe ugwu France bịa Andalusia na narị afọ nke iri na isii, a na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị na-ede uri Spanish kacha mma n'ebe ahụ. obodo .
Ọ bụ nwa mgbei dị obere, mgbe ọ dị naanị afọ 10. Ọ nọ na-agụ akwụkwọ na Colegio de San Telmo ruo mgbe emechiri ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka nne chi ya, Manuela Monahay nabatara ya. Ọ bụ ya mere ka ọ na-agụ ya agụụ ịgụ abụ kemgbe, kemgbe ọ bụ nwata, ịgụ ndị na-ede uri ịhụnanya bụ ụbọchị ya. N'ihi nke a, mgbe ọ dị afọ 12, o nwere ike dee Ode na ọnwụ Don Alberto Lisa.
Ọ bụ multidisciplinary onye, ebe ọ bụ na n'otu oge ahụ ọ na-agụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị na Seville, ọ mụtakwara eserese n'ụlọ ọrụ nwanne nna ya. Otú ọ dị, n'ikpeazụ, nwanne ya nwoke bụ Valeriano ghọrọ onye na-ese ihe.
Bécquer kpebiri na 1854 ịga Madrid ịchọ ọrụ metụtara akwụkwọ, n'ihi na ọ bụ ezi mmasị ya. Otú ọ dị, ọ dara ma nyefee onwe ya n'ọrụ nta akụkọ, n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe na-amasị ya ma ọlị.
Afọ anọ ka e mesịrị, na 1858, ọ dara ọrịa siri ike, n'oge ahụ, ọ zutere Julia Espín. N'ezie, n'agbata 1858 na 1861 ma Julia Espín na Elisa Guillem bụ ụmụ nwanyị abụọ "hụrụ n'anya" na onye na-ede uri. Ma, ọ dịghị ogologo oge n’ihi na n’afọ gara aga ọ lụrụ Casta Esteban, bụ́ ada dọkịta na onye ya na ya nwere ọtụtụ ụmụ. N’ezie, ọ gbahapụrụ ya ọtụtụ afọ ka e mesịrị mgbe ọ chọpụtara na ya na enyi ya nwoke ochie kpara ekwesịghị ntụkwasị obi nye ya.
Ọ gabigara ọtụtụ nsogbu ego, ọkachasị mgbe ọ hapụrụ ihe niile wee soro nwanne ya nwoke Valeriano na ụmụaka gaa Toledo. Ma n'afọ 1869, onye na-amasị ya. Eduardo Gasset, kpọtụrụ ya ka ọ laghachi Madrid dị ka onye nduzi nke akwụkwọ akụkọ Madrid La Illustration. A malitere ibipụta nke a n'afọ 1870 mana chi ọjọọ ọzọ kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya, nwanne ya nwoke nwụrụ na Septemba nke afọ ahụ. Ọnwa atọ ka e mesịrị, na December 22, 1870, Gustavo Adolfo Bécquer nwụrụ n'ihi oyi baa na ịba ọcha n'anya.
Kedu mgbe e bipụtara Rimas y leyendas de Bécquer
Isi mmalite: Prado Library
Nke bụ́ eziokwu bụ na akwụkwọ Rimas y leyendas de Bécquer, bụ́ nke e bipụtara na nke mbụ ya, abụghị otu ihe ahụ ị ma ugbu a. Karịsịa ebe ọ bụ na mgbe e bipụtara ya o nwere obere nkọwa okwu.
N'eziokwu, Mgbe e bipụtara ya n’afọ 1871, ọ bụ n’aka ndị enyi ha chịkọtara akụkọ ifo na ukwe n’ebumnobi na ego ha nwetara ga-enyere ma nwanyị ahụ di ya nwụrụ ma ụmụaka aka. Ma kama ịbụ onye a na-akpọ Rimas y leyendas de Bécquer, ha kpọrọ ya Obras. O wee pụta na mpịakọta abụọ, ma ka oge na-aga, a gbasaara ha na, dịka nke mbipụta nke ise, ọ malitere inwe mpịakọta atọ.
Kedu ụdị edemede Rimas y leyendas so na ya?
Isi mmalite: AbeBooks
Ọ bụ ezie na e ji abụ uri na akụkọ ifo mejupụtara akwụkwọ Rimas y leyendas de Bécquer, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ dabara n’ụdị uri agụmagụ.
Ugboro ole ka enwere?
N'ime akwụkwọ mbụ nke Rimas y Leyendas de Bécquer anyị nwere ike ịhụ 78 uri ebe o jisiri ike na-egosipụta mmetụta niile site na iji ezigbo asụsụ dị mfe mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe owuwu egwu.. Ugbu a, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ha na-amụbawanye.
N'ihe banyere ụdị ya, ọ dị nnọọ mfe ma kama nkwenye, Bécquer na-ahọrọ assonance, na-ejikarị ya eme ihe na stanzas.
N'ime otu nke ukwe, e nwere isi isiokwu anọ anyị nwere ike ịchọta: uri, n'ezie, nke bụ ngwakọta n'etiti abụ na nwanyị; ihunanya; ịhụnanya nke ndakpọ olileanya; na ezigbo ịhụnanya.
Anyị nwere ike ịsị na ọ na-eme ka evolushọn dị nta nke ịhụnanya, site na nke dị ọcha na nke kachasị njọ ebe ọ na-efunahụ.
N'ime akwụkwọ ahụ, a na-agụpụta ukwe ndị ahụ site na I ruo LXXXVI (1 ruo 86). Na mgbakwunye, enwere ukwe ndị ọzọ, na nke a nwere aha, nke bụ:
Bee okooko osisi.
Ọ bụ chi ọbụbọ.
Abụ m égbè eluigwe.
Ị nweghị mmetụta.
Na-akwado ọkpọiso m.
Ọ bụrụ na ị na-eṅomi gị ọkpọiso.
Ònye bụ ọnwa!
Mkpesa ndị ahụ.
Ụgbọ mmiri na-akwọ ụgbọ mmiri.
Na akụkọ ifo?
Akụkọ ifo ndị dị n'akwụkwọ a pere mpe. Kpọtụrụ, Anyị na-ekwu banyere akụkọ 16, ọ bụghị nke a na-ebipụtaghị, n'ihi na n'eziokwu, ha pụtara na ndị nta akụkọ sitere na 1858 ruo 1864, wee chịkọta ha.
Na akụkọ ifo ndị a Bécquer na-enye talent ya niile. Ọdịdị, isiokwu, ụdị akwụkwọ na prose na-eme ka ha bụrụ ndị kasị mma o dere na ọ bụ ezie na a na-ahụ ụzọ uri a na-ede uri, eziokwu bụ na ihe odide, isiokwu, ihe nkiri, wdg. ha na-eme ka usoro zuru oke nwere ihe pụtara na nkata nke ndị edemede ole na ole nwetara na ọkwa ahụ.
Kpọmkwem, aha akụkọ ifo ndị ị ga-ahụ (enwere ugbu a 22) bụ:
Master Pérez onye nhazi.
Anya ndụ ndụ.
Ụzarị nke ọnwa.
The rose nke ahuhu.
Ugwu nkpuru obi.
Ọrịre nke nwamba.
Onye isi na aka uhie.
Ihe mgbaaka ọla edo.
Kwere na Chineke.
Kraịst nke okpokoro isi.
Olu nke ịgbachi nkịtị.
Ọgba nke mora.
The nsusu ọnụ.
Ị gụọla Rimas y legends de Bécquer? Kedu ihe ị chere gbasara ya? Ọ ga-amasị anyị ịnụ echiche gị gbasara onye edemede a, yabụ nweere onwe gị ikwu okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Rhymes na akụkọ ifo nke Bécquer